Asan-jiolahy teny Ankatso Azo sambo-belona ny 9, voatifitra i Kôma
Taorian’ireo 9 lahy voasambotra ny faran’ny herinandro teo, dia lavon’ny BC4 teny amin’ny faritra Mausolée iny i Kôma izay
lohan’izy ireto amin’ity fikambana-jiolahy ity izay anisan’ny tompon’antoka amin’ny vaky trano, fanafihana mitam-piadiana, asa fanendahana miafara hatramin’ny vono olona, toy ny vola septambra lasa teo rehefa novelesin’ireto jiolahy ireto tamin’ny «bois rond» ny raim-pianakaviana iray izay maty sy ny vadiny mpivarotra anana teny Tsiadana. Nahatrarana rongony milanja 13 kilao koa tamin’izy ireo.
Ren’ny polisy fa nihaodihaody tamin’ny faritra Mausolée sy Ankatso ry Kôma. Raha hisambotra ireo polisy dia nitifitra ireo jiolahy ka niroso tamin’ny fampiasan-kery, afak’omaly tamin’ny 8 ora alina. Lavo nandritra ny fitifirana i « Kôma » raha toa kosa ka tafaporitsaka ireo namany roalahy. Mbola tratra teny aminy ny basy vita gasy iray niaraka tamin’ny bala ary antsy lava lela iray.
I Kôma dia naman’i Tsôla raindahiny amin’ny asa fanafihana mitam-piadiana izay efa any Tsiafahy. Anisan’ny tompon’antoka amin’ny fanendahana ireo mpianatra miditra vao maraina eny Ankatso izy ireo sy ny namany iray izay antsoina hoe «Belônne» efa any Tsiafahy. Fantatra koa fa anisan’ny nandray anjara tamin’ny fanafihana ny «Super-maki» Antsahameva izy ireo. Mitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika ireo namany hafa izay tafatsoaka.